Beesha caalamka ayaa ku baaqday in la xaliyo khilaafka wiiqay geedi-socodka arrimaha… – Hagaag.com
Beesha caalamka ayaa ku baaqday in la xaliyo khilaafka wiiqay geedi-socodka arrimaha…
Saaxiibadu waxay garwaaqsan yihiin in heshiiska 17kii September ay ansixiyeen Dowladda Federaalka, dhammaan Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah iyo Labada Gole ee Baarlamaanka, waxaana sidoo kale soo dhaweeyay musharaxiin badan oo u taagan xilka Madaxweyne. In kasta oo saaxiibada iyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka niyad jabeen in hanaankan uu aad uga hooseeyo doorashooyinka (qof iyo cod ah), ayaa haddana heshiiska 17-kii September wuxuu yahay aasaaska keliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021. Ma jiri karo dib-u-furid lagu sameeyo heshiiska 17-kii September ama abuuritaanka hanaan kale ama mid barbar-socda. Waxaa loo baahan yahay in is-faham ballaaran oo loo wada dhanyahay laga gaaro hirgelinta (heshiiskaas), si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geeddi-socodkan. Tani waa in ay la jaan-qaaddo ballan-qaadyadii lagu heshiiyay ee shirkii Madasha Iskaashiga Soomaaliya. Saaxiibadu waxay soo dhaweynayaan dadaallo dardar-gelin leh oo sida ugu dhakhsiyaha badan loogu xalliyo arrimaha taagan, looguna soo gabagabeeyo is-faham la’aanta maalmaha soo socda, si ay doorashadu u bilaabato dabayaaqada bishan.
Waa in la joogteeyo jawigii wadahadalka iyo isu-tanaasulka ku salaysnaa ee horseeday in la gaaro Heshiiska 17kii September si geedi-socodka doorashada horey loogu sii amba qaado.